ပုံမှန်အားဖြင့်သန့်စင်ထားသောရေဘူးများတွင်ဘုံဆိုင်းဘုတ်လေးခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုယ်စားပြုသောအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးကိုကြည့်ကြစို့။ ။ ၂။ ရနံ့ကုထုံး
မျက်မှောက်ခေတ်စက်မှုဖွံ့ဖြိုးမှုသည်ဖန်များအသုံးပြုမှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလာခဲ့သဖြင့်မှောင်မိုက်သော (နီ၊ အစိမ်းနှင့်အပြာ) ဖန်ပုလင်းများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီထုပ်ပိုးမှုကိုအကြီးအကျယ်လက်ဝါးကြီးအုပ်ခဲ့သည်။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ဖန်ပုလင်းသည်အညိုရောင်၊ ဥပမာအပြာရောင်, နှင်းခဲ ...
ပုလင်းအဆို့ကိုဖွင့်ပါ၊ အရောအနှောတစ်ခု၏အဆုံးကို aromatherapy အရည်ထဲသို့နှစ်မြှုပ်ပါ။ ၎င်းကို (ဥပမာရေချိုးခန်းကဲ့သို့) နေရာအနည်းငယ်တွင်အသုံးပြုပါကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်အတွက်အနည်းငယ်သောသံကြိုးချောင်းများကိုထည့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ...
တံဆိပ်ခတ်ထားသောအမွှေးပုလင်းဟောင်းကိုရေမွှေးဖြင့်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်အဆင့်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ရေမွှေးပုလင်းကိုရေနဲ့ဆေးပါ။ ထို့နောက်ရှလကာရည်နှင့်ရေအနည်းငယ်ကိုပုလင်းထဲသို့ထည့်။ ထပ်မံသန့်စင်ပါ။ ဒီခြေလှမ်းပိုးသန့်ဆေးသည်။ ထိုပြွတ်ကိုလည်းနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သန့်စင်သင့်သည်။ & nb ...
COMI AROMA ရိဒ်ပျံ့နှံ့သည့်အချက်များ
Reed diffusers ဆိုတာဘာလဲ။ သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြတာလဲ။ Reed ပျံ့နှံ့သူများသည်ယခုပင်အိမ်တွင်းအမွှေးနံ့သာများတွင်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ သူတို့ကအသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါ၏ ကျူပင်များကိုဖန်ပုလင်းထဲ၌ထည့်ပြီးမွှေးသောပျံ့နှံ့သောဆီအိုးတစ်လုံးထဲသို့ထည့်သည်။ ကျူပင်များသည်သင့်ရနံ့ကိုစုပ်ယူပြီးသင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်၌သာယာသောအနံ့ထွက်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝတွင်ဖန်ပုလင်းများကိုနေရာတိုင်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဖန်ပုလင်းများသည်အချိုရည်များ၊ ဆေးဝါးများ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများစသည်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအဖော်ဖြစ်သည်။ ဖန်ပုလင်းများသည်သူတို့၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ဓာတုတည်ငြိမ်မှုနှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးထုပ်ပိုးပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဟုအမြဲယူမှတ်ကြသည်။ အကြောင်းအရာများ, ca ...
ရေမွှေးပုလင်းများတီထွင်မှုကြောင့်သုံးစွဲသူများအဖို့ရွေးချယ်စရာများအတွက်လှပသောပုလင်းပုံစံများနှင့်ပိုများလာသည်။ ဒီပုလင်းတွေရဲ့ပုံစံကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်ခဲ့သလဲ။ ဖန်ပုလင်း၏ပုံသဏ္processာန်သည်စီပွားရေးအစီအစဉ်တစ်ခုတွင်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သော (စက်ယန္တရား၊ အီလက်ထရောနစ်စသဖြင့်) လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖန်ပုလင်းနှစ်မျိုးခွဲခြားသည်။ တစ်ခုမှာပုံသွင်းပုလင်းဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာပြွန်ဖြစ်သည်။ ပုံသွင်းပုလင်းများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရနံ့ကုထုံး၊ ရေမွှေး၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများစသည်တို့အတွက်အသုံးပြုသည်။
ဖန်ပုလင်း၏ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများကိုပုံသွင်းခြင်းနှင့်ပြွန်အဖြစ်ခွဲသည်။ ထို့ကြောင့်ပုံသွင်းပုလင်းနှင့်ပြွန်ပုလင်းများအကြားအဓိကကွာခြားချက်များမှာအဘယ်နည်း။ အောက်ပါအချက်သုံးချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာပါမည် - ၁။ ပုံပန်းသဏ္isာန်ကွဲပြားသည်၊ ပြွန်ဘူး၏အသွင်အပြင်သည်ပိုမိုတောက်ပ။ အနည်းငယ်ပိုကောင်းသည်။
ဖန်ထုတ်လုပ်ခြင်းသမိုင်းကိုဘီစီ ၃၅၀၀ ခန့်တွင် Mesopotamia သို့ပြန်ပို့နိုင်သည်။ ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာအထောက်အထားများအရပထမဆုံးစစ်မှန်သောဖန်သည်ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်း၊ မက်ဆိုပိုတေးမီးယား (သို့) ရှေးဟောင်းအီဂျစ်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘေးထွက် ...
ဖန်ဝိုင်ပုလင်းထုတ်လုပ်မှုတွင်ပူဖောင်းသည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကိုအမြဲရှုပ်ထွေးစေသောပြofနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပူဖောင်းများသည်အရည်အသွေးကိုမထိခိုက်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ဗေဒအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အထူးသဖြင့်အဆင့်မြင့်ရေမွှေးပုလင်းများတွင်အချို့သောပူဖောင်းများသည်တည်ရှိရန်ခွင့်မပြုပါ။ ပြီးတော့ ...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုပေါင်းစပ်ရန်နည်းလမ်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများသည်အဖိုးတန်ပြီးမတည်ငြိမ်သောဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သဖြင့် ၄ င်းတို့ကိုပြင်ဆင်သည့်အခါဂရုပြုပါ။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုရှောင်ရှားရန်တစ်ကြိမ်တွင်ပိုမိုချိန်ညှိရန်မသင့်လျော်ပါ။
၁။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုမှောင်မိုက်သောဖန်ပုလင်းများတွင်ထည့်ပါ။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများသည်မတည်ငြိမ်သော၊ အလင်းဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုသိုလှောင်ရန်ပလတ်စတစ်ပုလင်းများကို သုံး၍ မရပါ။ ပလတ်စတစ်၏ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်လျှင်လိုအပ်သောအဆီများ၏အရည်အသွေးပျက်စီးသွားလိမ့်မည်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖန်ပြွန်ပုလင်း၏ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်ရန်သင့်အားခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ ပထမ ဦး စွာဖောက်သည်မှလိုအပ်သောအချင်း၏ဖန်ပြွန်ကိုစက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ မာစတာသည်စက်ကိုကောင်းစွာချိန်ညှိပြီးဖန်ပြွန်ကိုပုံသေအရှည်ပုလင်းပုံသဏ္ဌာန်အဖြစ်လှံစွပ်သို့မဟုတ်စကရင်ဖြင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖန်ပုလင်းအောက်ခြေတွင်အက္ခရာများသို့မဟုတ်နံပါတ်များကိုမကြာခဏတွေ့ရှိလေ့ရှိသည်။ ဖောက်သည်အတော်များများကဒီနံပါတ်များကိုဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာမေးပါ။ သူတို့ဘာကိုကိုယ်စားပြုသလဲ။ များသောအားဖြင့်ဖန်ပုလင်းထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများမှာ - လိုင်းစက်၊ လက်စွဲစက်၊ inverted machine၊ ယင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှိုအမျိုးမျိုးနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
1. မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများဘာတွေလဲမရှိမဖြစ်အဆီများဘာတွေလဲ? လူချမ်းသာ၏အသုံးအနှုန်းများ - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီသည်အထူးသဖြင့်ရေနံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ထူးခြားရသနည်း။ ၎င်းသည်စျေးကြီးပြီးအလွန်ရိုးရှင်းခြင်းကြောင့်၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၊ အပင်တစ်ပင်၏ဝိညာဉ်နှင့်ထုတ်ယူထားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သာမန်ဖန်ပုလင်းများသည်အဆိပ်ရှိသလား။ Taobao မှဒေါ်လာအနည်းငယ်ဖြင့်ရောင်းချသောဖန်ဘူးများသည်အစားအစာသိုလှောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဝိုင်သို့မဟုတ်ရှလကာရည်လုပ်ရန်အန္တရာယ်ကင်းသလား။ ဒီဟာကအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုဖျက်သိမ်းမလား။ အဘယ်ကြောင့်အချို့သောနိုင်ငံခြားအမှတ်တံဆိပ်ဖန်ပုလင်းများအထူးစျေးကြီးရောင်းချသလဲ? သာမာန်ဖန်ပုလင်းများမလုံခြုံပါ？aGla ...
The Song Dynasty စာတတ်မြောက်ရေးစာနယ်ဇင်း“ Dream Lianglu” တွင်“ နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့ခြင်း၊ လက်ဖက်ရည်ညွှန်ပြခြင်း၊ ပန်းချီဆွဲခြင်းနှင့်ပန်းများစီစဉ်ခြင်း။ ယေဘူယျအဓိပ္ပာယ်ကတော့ wan ...
သုတေသနနှင့်စျေးကွက်များကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖန်ပုလင်း Market Outlook (2019-2027) အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာအရ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၃.၇၇ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသည့်ကမ္ဘာ့ထည်ထုပ်ပိုးသည့်ပုလင်းစျေးကွက်သည် ၂၀၂၇ တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၅.၄၄ ဘီလီယံအထိရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်ထားသည်။ နှစ်စဉ်တိုးတက်မှုနှုန်း ၆.၅% တိုးတက်မှုနှုန်း ...
ဖန်ပုလင်း၏အရည်အသွေးသည်ဒီဇိုင်းနှင့်ပစ္စည်းအရည်အသွေး၊ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်မှိုထုတ်လုပ်မှုတို့နှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်။ သက်သေပြထုတ်လုပ်မှုအတွက်အလွန်အရေးပါခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သက်သေပြခြင်းသည်ဖန်ပုလင်း၏ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အရည်အသွေးအပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသဖြင့်၎င်းကိုအလေးအနက်ထားရမည်။ ၁ ။
Frosting နည်းပညာသည်ဖန်ပုလင်း၏ထုတ်ကုန်သို့ pickling solution (သို့) ဖန်အရောင် glaze အမှုန့်အလွှာတစ်ချပ်ကိုပူး တွဲ၍ အပူချိန်မြင့်မားပြီး ၅၈၀ မှ ၆၀၀ at တွင်ဖန်ခွက် glaze ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောဖန်သားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အရည်ပျော်သွားသည်။ ကွဲပြားသောအတူအလှဆင်နည်းလမ်းပေါ်လာ ...
ထုတ်လုပ်ခြင်းမှဖန်ပုလင်းအတွက်ထုပ်ပိုးခြင်းအထိအဆင့် ၆ ဆင့်ရှိသည်။ Batching、 အရည်ပျော်ခြင်း、 မှုတ်、 မီးလောင်、 စစ်ဆေးခြင်း、 ထုပ်ပိုးခြင်း။ သဲ၊ ဆီလီကွန်နှင့်ထုံးကျောက်များကဲ့သို့သောကုန်ကြမ်းများကိုသုတ်ခြင်းနှင့်ရောနှော။ မီးဖိုထဲသို့အစဉ်မပြတ်ကျွေးမွေးသည်။ အရည်ပျော်သောပစ္စည်းများသည်မီးဖိုအတွင်းမှအပူနှင့်အရည်ပျော်ကြသည်။ ငါတို့ ...
Flameless aromatherapy - Natural Rattan VS Fiber Rattan ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကနည်းနည်းလေး
သဘာဝသံစဉ် - Rattan များသည်များသောအားဖြင့်အဖြူရောင်စပျစ်နွယ်ပင်များ၊ မိုးမခ / စပျစ်နွယ်ပင်များသို့မဟုတ်ကျူပင်များကဲ့သို့သောသဘာဝအပင်များဖြစ်သည်။ စပျစ်နွယ်ပင်များ၏အဆုံးသတ်နှစ်ခုစလုံးသည်အပေါက်များဖြင့်ပြည့်နေပြီးတစ်ခုစီ၏အရှည်နှင့်အဖြစ်များတတ်သည်မှာအနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ Fiber Rattan: Rattan ကိုအမျှင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် Rattan ၏အပေါက်များသည်အညီအမျှဖြန့်ဝေထားသည်။
flameless aromatherapy ၏အားသာချက်များ
မွှေးကြိုင်သောရနံ့ကုထုံး၊ ဖယောင်းတိုင်မွှေးကုထုံး၊ ကားရနံ့ကုထုံးစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ရနံ့ကုထုံးအမျိုးအစားတိုင်းတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မီးမွှေးသောရနံ့ကုထုံး၏အားသာချက်ကိုဆွေးနွေးပါမည်။ & ...